Arsenal oo guul wax ku ool ah ka gaartay dhigeeda Kooxda Valencia xili Chelsea bar-baro ay la dhaafi weyday Eintracht Frankfurt – Gool FM
Arsenal oo guul wax ku ool ah ka gaartay dhigeeda Kooxda Valencia xili Chelsea bar-baro ay la dhaafi weyday Eintracht Frankfurt
Bashiir May 2, 2019
( Europe) 2 Maajo 2019 Kooxda Arsenal ayaa guul wax ku ool ah ka gaartay dhigeeda Kooxda Valencia kulanka lugta koowaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Europa League kaddib ciyaar ku dhamaatay 3-1.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana la iska dhaliyey sedex gool bilowgii hore ee ciyaartaba.
Kooxda Valencia oo marti aheyd ayaa la timid goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga lagu magacaabo Diakhaby kaddib caawin uu ka helay Rodrigo daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta.
Waqti badan kama aysan soo wareegin, durba Kooxda Arsenal ayaa la timid goolka bareejada ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga reer Farance ee Lacazette kaddib caawin uu ka helay Aubameyang daqiiqadii 18-aad ee ciyaarta.
Kooxda Arsenal ayaa sii laba jibaartay weerarkooda iyaga oona helay goolkii labada ee ciyaarta waxaana mar labaad shabaqa gaaray Lacazette daqiiqadii 26-aad ee ciyaarta.
Qaab ciyaareedka Kooxda Velencia ma aheyn mid hooseeya ee waxa ay sameenayeen isku dayo badan balse ma helin gool labad, ugu dambeena kulanka ayaa lagu kala nastay 2-1 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Arsenal.
Muddo kooban kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan, Kooxda Valencia ayaana ku soo gashay dar dar aad u xoogan madaama gool loogu hogaaminayey ciyaarta.
Dadaalo badan ayey la yimaadeen kooxda reer Spain ee Velencia lkn nasiib daro waxa ay awoodi waayeen in ay dhaliyaan gool, ugu dambeena daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta Aubameyang ayaa dhaliyey goolkii niyad jabka ku riday taageerayaasha Kooxd Velencia misane ka farxiyey taageerayaasha Gunners, natiijada kulanka ayaana noqotay 3-1.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Arsenal iyo Velencia ayaa ku soo idlaaday 3-1 oo ay ku badisay Kooxda Arsenal.
Dhica kale kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Eintracht Frankfurt iyo Chelsea ayaa ku soo idlaaday bar-baro 1-1.
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa lagu kala maray bar-baro 1-1, Frankfurt ayaa la hormartay goolka waxaana u dhaliyey Jovic halka kooxda Bules goolka bareejada uu u keenay laacibka reer Spain ee Pedro Rodriguez.
Markii dib la isagu soo laabtay qeebtii dambe ee ciyaarta, ciyaaryoyda labada dhinac ayaa sameeyey fursado wollow Kooxda Chelsea ay ka fursado badneed hadana wey awoodi waayeen in ay la yimaadaan gool.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku soo idlaaday bar-baro gool 1-1, kulan ciyaareedka lugtiisa labaad ayaana ka dhici doono garoonka kooxda Bules.
Shaxda rasmiga ah kulanka caawa ee kooxaha Arsenal iyo Valencia oo lagu dhawaaqay
Macallin Maurizio Sarri oo xaqiijiyey haddii uu David Luiz wadahadal heshiis kordhin ah kula jiro Chelsea